IMartech Ifakiwe ku-bizMarketing Magazine | Martech Zone
Uma uthola ithuba, bhalisela okubhaliselwe kwe- bizMarketing Magazine. Basanda kushicilela kabusha udaba lwethu ngokukhula nekusasa le- I-SocialTV. Kwakukuhle ukusibona lapho kushicilelwa, futhi umagazini wedijithali wawugcwele izindatshana ezinhle kanye nezeluleko eziningi.
I-bizMarketing Magazine inikeza amabhizinisi aku-inthanethi nabachwepheshe bezokumaketha ngezihloko ezinhlobonhlobo zezindatshana ezenzelwe ukukugcina unolwazi lwakamuva emhlabeni oshintsha njalo wokumaketha online. Umagazini ngamunye wanyanga zonke ufaka phakathi okunye okuqukethwe okuhle kakhulu okutholakala ku-inthanethi, kanye nama-athikili ahlukile abhalelwe abafundi bethu kuphela.
Tags: ukumakethisaukushicilelwa kwe-ipadumagaziniumagazini wokumaketha